Mareykanka oo si weyn u soo dhaweeyay hada-hadallada DF Somaliya iyo Somaliland uga bilowday Jabuuti | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Mareykanka oo si weyn u soo dhaweeyay hada-hadallada DF Somaliya iyo Somaliland...
Mareykanka oo si weyn u soo dhaweeyay hada-hadallada DF Somaliya iyo Somaliland uga bilowday Jabuuti
Muqdisho (Halqaran.com) – Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa si diiran u soo dhaweysay wada-hadalada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland Axadda maanta ah uga bilowday dalka Jabuuti.
War qoraala oo ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in lagu soo dhaweynayo wada-hadalada labada dhinac.
Qoraalka ayaa waxaa lagu ammaanay doorka hoggaamineed ee Madaxweynaha Somaliya iyo Madaxweyne Muuse Biixi, iyadoo dhanka kalana loogu mahadceliyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle oo wadahadalada marti-gelinaya.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa ay soo dhaweyneysaa furitaanka wadahadalada Somaliyaa iyo Somaliland.”
“Waxaan amaaneynaa hoggaaminta Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waxaa mahad leh Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo martigeliyay kulan taariikhi ah.”
Dhanka kale Safaaradda Mareykanake e Somaliya ayaa waxay shacbiga Soomaaliyeed ugu baaqday in ay qayb ka noqdaan dadaalada wadahadalada labada dhinac, si looga mira dhaliyo.
Wadahadalada galabta ka furmay Magaalada Djibouti ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgelaya Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, ka dib markii uu ku soo casuumay Madaxweynaha Jabuuti.
Bulshada Soomaaliyeed, dal iyo dibadba waxaa ay isha ku hayaan wadahadaladan, oo aan la aqoon inta ay socon doonaan iyo waxa ka soo bixi doonaba.
Mareykanka oo soo dhaweeyay